Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliya oo dilay hor-jooge ka tirsanaa Al-Shabaab - Hargeele - Wararka Somali State
Muqdisho-(SONNA)-Howl-gal qorsheysan oo ay Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliya qaybtiisa Danab ka fuliyeen degaanka Koban ee Gobolka Jubbada hoose ayaa lagu dilay hor-jooge ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab iyo Malleeshiyaad la socday.
Taliyaha guutada 16-aad Ciidanka kumaandooska ee xoogga Dalka Soomaaliyeed, G/le ; Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in ay howl-galkooda ku dileen horjooge ka tirsanaa Argagixisada Al-Shabaab oo lagu Magacaabi jiray, Cali Garweyne iyo Afar kale oo isaga ilaalo u ahayd.
Taliyaha ayaa sheegay in ay wadada udhexeeysa Jamaame iyo Kismaayo kasoo saareen Miinooyin ay galiyeen Malleeshiyaadka Al-Shabaab,si ay ugu dhibaateeyaan Dadka Shacabka ah.
Wasiirro ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle oo xilka laga qaaday
Taliyaha Boliiska oo Tababar u furay Ciidamo ka mid noqonaya kuwa Haramcadka+Sawirro
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo kormeeray xarunta baadi qabadka